Guddoomiyaha bankiga dhexe ee DFS oo ka digay sicirka bararka ka taagan dalka – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha bankiga dhexe ee DFS oo ka digay sicirka bararka ka taagan dalka
Guddoomiyaha bankiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya Bashiir Ciise Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa si qoto-dheer uga warbixiyay lacagaha cusub ee dhawaan dalka loo soo daabacayo iyo sare u kaca haatan ku yimid qiimaha sarifka Shilling Soomaaliga.
Bashiir Ciise Cali ayaa sheegay in sare u kaca ku yimid Shilling Soomaaliga ay ka dambeeyaan shaqsiyaad uu ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal, qalqal gelinayo nolosha bulshada Soomaaliyeed.
Sidoo kale, wuxuu guddoomiye Bashiir Ciise sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doonno ciddii ka shaqeeysa sare u kac ku yimaada lacagta Shilling Soomaaliga.
Dhinaca kale, guddoomiye Bashiir Ciise Cali ayaa ugu baaqay hay’adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan shaqsiyaadka ka shaqeeynaya sicir bararka ku yimid Shilinka Soomaaliga, wuxuuna markale ku wargeliyay bulshada Soomaaliyeed in loo badeli doonno lacagahooda marka dalka laga dhaqangeliyo lacagaha cusub ee la qorsheeynayo in dhawaan lasoo daabaco.
Guddoomiyaha ayaa xusay in lacagaha cusub aan muddooyinkaan dhaw lasoo daabaci doonnin, balse markii lasoo daabaco lacagta cusub kadib dadka loo bedeli doonno lacagta ay heystaan oo shilling Soomaaliga saxda ah.
Hadalka guddoomiyaha bankiga dhexe Soomaaliya Mudane Bashiir Ciise Cali ayaa imaanaya xilli maanta qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho laga diiday in wax lagu kala iibsado lacagta shilling soomaaliga, taas oo sare u kac ku keentay sarifka doollarka iyo shilling soomaaliga.